xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အမုန်းခံပြီး ရေးလိုက်သည်
ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ "ပွင့်လင်းသူရှိမှ ပွင့်လင်းမီဒီယာ ဖြစ်လာမည် " ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ၊ ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးရှင်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ခေါ်တဲ့ မီဒီယာကဏ္ဍ အရေးပါပုံ ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပုံ တို့ကိုဖေါ်ပြပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မီဒီယာနဲ့စိမ်းနေသေးပုံ ပွင့်လင်းရန်လိုအပ်နေပုံ တို့ကို အကိုးအကားအချို့နဲ့ ဖေါ်ပြထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် ၊ ကောင်းပါတယ် ဒီလိုထောက်ပြဝေဖန်တာ ၊ ဒါပေမယ့် မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်ရော ပြည်သူ့အသံကို သရုပ်ဖေါ်နိုင်ပါရဲ့လား ၊ မီဒီယာရဲ့အသံ ဟာ ပြည်သူ့အသံ အမှန် ဖြစ်ပါရဲ့လားလို့ ပြန်မေးစရာ တွေးမိလာပါတယ် ။
ကျွန်တော်လဲ အဆင်ပြေအောင် ပြသနာမဖြစ်အောင် ပြောတတ်ပါတယ်၊ ရေးတတ်ပါတယ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း ၊ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၊ ကမ္ဘာမှာဝင်ဆန့်မှုတွေဟာ နိုင်ငံအပေါ်မှာ ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အလားအလာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ။ အခုပါတီတရား ၀င်လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းရွေးချယ်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ မီဒီယာတွေကလည်း အခက်အခဲတွေကြားထဲက ပြည်သူ့တာဝန်ကို ကျေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ. .ရေးရင်၊ ပြောရင် ရတာပေါ့ဗျာ ... ။ ဒါပေမယ့် ပြောစရရှိတာ ကိုပြောကိုပြောရပါ့မယ် ၊ အမုန်းခံပြီးတော့ကို ပြောရပါ့မယ် ဒီနေ့မီဒီယာအများစုဟာ ပြည်သူ့ အသံအစစ်ကို သရုပ်မဖေါ်နိုင်သေးပါဘူး (တိုင်းပြည်ကို နှစ်ရှည်လများတင်းတင်းကျပ်ကျပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သူတွေကြောင့် ခုလိုဖြစ်နေတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ) ၊ မီဒီယာရဲ့အသံဟာ ပြည်သူ့အသံအမှန် မဖြစ်သ၍ တိုင်းပြည်ဟာ အန္တရာယ်တွေ ရှိနေဦးမှာပါဘဲ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ ဖြစ်နေဦးမှာပါဘဲ...။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင် မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ဖတ်လိုက်ရင် NLD ပါတီ ချီးမွမ်းခန်းတွေ ထပ်နေပြီး ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတော့ လူဆိုးပါတီအဖြစ် သရုပ်ဖေါ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ ၊ ဒီလိုပြောလိုက်ရင် ဒါပြည်သူ့အသံပဲလေ... ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ဘယ်သူကမှမကြိုက်တာ ဒါကြောင့် ဒီလို ဖြစ်နေတာပေါ့ ၊ NLD ကတော့ လူတိုင်းကြိုက်တယ်လေ.. လို့ ပြောကြမှာပါဘဲ ... ဒီအတိုင်းအမှန်ဖြစ်ပါရဲ့လား ဆိုတာ သေသေချာချာ ကြည့်ရအောင်ပါ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလက ထင်ရှားတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လွင်မိုးဟာ သူဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း မီဒီယာတွေကနေ တဆင့် ပြောခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးပါဘဲ ၊ သူ့ဟာသူဘယ်ပါတီကြိုက်ကြိုက် သူ့ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပါတီကိုမဲပေးလိုက်ယုံပါဘဲ ၊ ဒါပေမယ့် မီဒီယာတွေဟာ မင်းသား လွင်မိုးကို ဗီလိန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြတယ် ၊ မဲပေးခါနီး ရက်ပိုင်အလိုမှာ လွင်မိုးက သူဟာ မဲပေးဘို့အတွက် သူ့ ဇာတိကိုပြန်မှာဖြစ်ကြောင်း မဲပေးရာမှာလဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဦးဌေးမြင့်ကို ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို လိုက်ပြန်တဲ့အတွက် မီဒီယာတွေနဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ လွင်မိုးဟာ လူဆိုးကြီးလုံးလုံး ဖြစ်သွားတယ် ၊ ကြံ့ဖွတ် လွင်မိုး ဘာညာဆိုပြီး ပြောကြဆိုကြသံတွေစီစီညံခဲ့ကြတယ် ။ ဒီအထိ ထင်စရာရှိတာက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမကောင်းပါဘူးလို့ ပြည်သူ့အသံ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် တွေက ထောက်ပြနေပါ ရက်နဲ့ ဒီမင်းသားလွင်မိုးဟာ လုပ်ချင်ရာလုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီး ၀ိုင်းဆဲကြတာဖြစ်မယ် လို့ ထင်စရာရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ မဲရလဒ်တွေလဲထွက်လာရော လွင်မိုးထောက်ခံတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဦးဌေးမြင့်နိုင်သွားတယ် ၊ ကြိုတင်မဲ ကျန်တဖက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်တောင် သူပဲနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဆိုရင် ခုနအွန်လိုင်းပေါ်ကအသံတွေဟာ ပြည်သူ့အသံမဟုတ်ဘူးပေါ့ ...၊ ဒီလိုတွေးစရာဖြစ်လာပါတယ် ။
ဒီလိုပြောလိုက်တိုင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးက မဲလိမ်တာကိုး ၊မဲခိုးတာကိုး ဒါတောင်မသိဘူးလားဆိုပြီးတော့ အပြစ်တင်တတ်ကြတယ် ၊ အရှုံးကို လက်ခံဘို့ မြန်မာတွေ ၀န်လေးနေတာကိုတွေ့ရတယ် ၊ အရှုံးကို ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံနိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိမချင်း ပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေးနေဦးမှာပါဘဲ ။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ပါ ...။
NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲမ၀င်တဲ့အတွက် အတိုက်အခံဘက်မှာ နိုင်ငံရေးအရ အထင်အရှားဆုံးသူဟာ ဦးသုဝေလို့ ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး ၊ အဲဒီတုန်းက ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ ၊ ပြည်ပမီဒီယာတွေမှာ ဦးသုဝေနာမည်ဟာ ထပ်နေပါတယ် ၊ သူ့အင်တာဗျူးတွေကလည်းနားမထောင်ချင်အဆုံးပါ ၊ သူနဲ့ပြိုင်ဘက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာ ဦးအောင်ကြည် ဖြစ်ပါတယ် ။ သတင်းတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်လဲ ဦးအောင်ကြည် ဟာ ဟိုအလုပ်သမားအေဂျင်စီက ကွန်ပြူတာတွေတောင်းပြီး လှူပြနေပါတယ်တို့ ၊ ဘယ်ကလေးကစားကွင်းက ကိစ္စမှာတော့ ဘယ်လိုမတရားလုပ်ပါတယ်တို့ ၊ စုံနေတာပါဘဲ ... ၊ မီဒီယာပေါ်ကအခြေအနေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးအောင်ကြည်ဟာ နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူး ။
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့ကျတော့ ဦးသုဝေဟာ မဲရုံမဖွင့်ခင်ကတည်းက ရောက်နေပါတယ် ၊ တစ်နေကုန် ထိုင်နေပါတယ် ၊ မြို့နယ်ထဲက တခြားမဲရုံတွေမှာလည်း သူ့လူတွေ သတင်းထောက်တွေ ၊ အင်ပြည့် အားပြည့်နဲ့ သူတို့ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌအတွက် စောင့်ကြည့် ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ မဲရေတွက်တော့လဲ သူတို့လူတွေအကုန်ပါ ပါတယ် ။ ဘယ်လိုမှ လိမ်လို့ကောက်လို့မရပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် မဲတွေအားလုံးရေတွက်ပြီးတဲ့အခါ သူရှုံးပါတယ် ၊ ဒီအနိုင်အရှုံးစာရင်းကိုကြည့်ပါ ၊ ကြိုတင်မဲတွေ အကုန်ယူလဲ ဦးအောင်ကြည်ကို ဦးသုဝေမနိုင်ပါဘူး ....။
သူနဲ့အလားတူ အခြားနာမည်ကြီးသူတွေဖြစ်တဲ့ ၊ ဒေါ်သန်းသန်းနု ၊ ဒေါ်နေရီဗဆွေ ၊ ဒေါ်ချိုချို ကျော်ငြိမ်းတို့ လဲ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတွေမှာ ဒီလိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီး ရှုံးသွားကြပါတယ် ။ ဒီလိုထင်ရှားသူတွေ ၊ ခေါင်းဆောင်တွေ မှရှုံးရင် ကျန်တဲ့သူတွေ ရှုံးတာဘာဆန်းလဲဗျာ .... မဟုတ်ဘူးလား ၊ ဒါပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်ကကာကွယ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့လဲ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောပြော ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကို ထောက်ခံသူတွေရှိကိုရှိတယ် ဆိုတာကို လက်မခံလို့မရပါဘူး ဆိုတာပြောချင်တာပါ...။ အရင်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို အင်နဲ့အားနဲ့ ထောက်ခံတဲ့ သူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် အခုရွေးကောက်ပွဲရော.....??? ၊ ဒီလူတွေအကုန်လုံးသေမသွားလောက်သေးပါဘူး ရှိနေဦးမှာပါဘဲ ။
နောက်တစ်ခုစဉ်းစားစရာရှိတာက အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့် မဲဆန္ဒနယ်တွေဟာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်သွားလို့ လစ်လပ်သွားတဲ့နေရာတွေ ၊ တနည်းပြောရရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေ ဒီပါတီရဲ့ အမာခံ နယ်မြေတွေအများစု ဖြစ်တယ် ဆိုတာမေ့မထားဘို့ လိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် ။ ဒါ... NLD မပြိုင်သေးလို့ပါကွာ... ပြိုင်ရင် ဒီကြံ့ဖွတ်တွေ မနိုင်ပါဘူး ဘာညာနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောလို့ရပါတယ် ။ ပြောပါ ၊ နိုင်သွားရင်ဘာပြသနာမှမရှိပါဘူး ။ ပြသနာရှိတာက ရှုံးသွားရင် ပါ ။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ဆိုလိုရင်းက လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကတရားတယ် ရှုံးရင်မတရားဘူးဆိုတဲ့ အသံတွေထွက်လာမှာစိုးလို့ပါ ၊ ဒီလိုထွက်လာတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ၊ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲတယ် ၊ တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲနေတဲ့တိုင်းပြည် ၊ ဘယ်တော့မှ မတိုးတက်ပါဘူး ၊ မကြီးပွားနိုင်ပါဘူး ၊ ပြည်သူတွေ မီဒီယာတွေက ဒီရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုရှိအောင် ၊ မတရားလုပ်လို့မ၇အောင် မကျင်းပခင်ထဲက သေချာစောင့်ကြည့် ဖို့သာ လိုပါမယ် ၊ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ခုတ်မောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရထားကြီး ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် အရှိန်တက်သွား တာပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။တန့်မသွားစေချင်ပါဘူး ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 6:01 AM
How to takeaportrait to Myanmar President in 90 ...
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဘာကြောင့် ရုပ်သိမ်းသင့်သလဲ
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ချ...
လူသိများသူနှစ်ဦး၏ လူသိနည်းသော နောက်ကြောင်းတစ်ခု
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လွှတ်တော်အသီးသီ့း၏ တတိ...
နာမည်ကြီး ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်အား ဗုံးခွဲမည်ဟုခြိမ်ြးေ...
" အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် အမတ်များ မြန်မာဟု ပြောင်းလဲ...
ကာတွန်းမြေဇာ ဘီယာသောက်ရင်းအားနာတတ်ဘို့ ရေးလိုက်တယ်...
အမေရိကန်သမ္မတလောင်း Newt Gingrich က CNN သတင်းထောက်က...
မြန်မာ တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုအား ဂျာမန်ကလပ် နုရင...
အစ္စရေးဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခု မြန်မာတွင် ရ...
"ခင်ညွန့်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင် သိန်းစိန်နဲ့ အောင်...
NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှု အငြင်းပွားမှု...
အစိုးရနှင့် KIO ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးနောက် ထု...
မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် KIO တို့ ငြိမ်းခ...
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ (Stop Online Piracy Act) ကိုကန့်...
ရန်ကုန်လေဆိပ် တိုးချဲ့ရေးစီမံကိန်းနှင့် အခြား အထော...
ဦးခင်ညွန့်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကား...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးသို့ အိတ်...
ဗိုလ်မှူးချုပ် ချစ်သန်း(ငြိမ်း) ကျွန်းစုမြို့နယ်မှ...
ထူးခြားသည့် ကြေးမုံသတင်းစာအာဘော် (သို့ ) ကြိုးတန်း...
၅၀၀၀ တန် ဖုန်းကဒ်ရနိုင်မရနိုင်၏ အဓိကသော့ချက်
KNU နှင့် အပစ်ရပ်စဲရန် သမ္မတရုံးမှ ကက(ကြည်း) သို့ ထ...
အစိုးရက အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၆၅၁ ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်း...
NLD က ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မ...
KIA က ရပ်နားခိုင်းသဖြင့် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ေ...
အစိုးရနှင့် KNU တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီ
အစိုးရသစ် လက်ထက် စည်သူဘွဲ့ ရ အနုပညာရှင်များ
ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားပြသနာနှင့် အီရန် - အမေရိကန် စစ်ေ...
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့မှ ရေနံ မရပါက ကမ္ဘာကြီး ၂၄ နာရီကြာ...
၆.၁.၂၀၁၂ နေ့ထိ အထူးပါမစ်ကားများထုတ်ယူမှု အခြေအနေ
KIA က မိုးကောင်းနှင့် ဖားကန့်ကြား ၃ နေရာအား မိုင်း...
Financial Time သတင်းစာကြီးက Burma အစား Myanmar ဟုေ...
Myanmar’s First Girl Band Pushes Limits of Censors...
မြစ်ကြီးနားမြို့အနီး အင်အားအသင့်တင့် မြေငလျင်လှုပ်
၅၀၀၀ တန်ဖုန်း ရောင်းချပေးမည့် ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီ...
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အတွက် သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ လုံခြုံေ...
တတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် အကျဉ်းသား...
ဒါဖတ်ပြီးမှ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းက ကျောက်မီးသွေးသုံး...
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြား​ရေး​ဝန်ကြီး​ ဝီလျံဟိတ်(William...
NLD ပါတီ တရားဝင်ပါတီဖြစ်ပြီ
လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရန်ခေါ်ယူ
ဖုန်းတစ်လုံး ကျပ်ငါးထောင်ဖြင့် မကြာမီ ရောင်းချပေးေ...
သီးသန့်အကျဉ်းသား ( နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား) များ သီးခြ...
လွပ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ြေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အားနည်းချက်များကို စောင့်ကြည်ရ...
Eleven Media က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားဝေဖန်သည့်ဆောင်...
သမ္မတ အိုဘားမားအစိုးရက မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို...